England Oo Cabasho U Gudbisay UEFA, Ka Dib Markii Xulka U-21 Ay Dagaal Iyo Cunsuriyad Kala Kulmeen Serbia - jornalizem
England Oo Cabasho U Gudbisay UEFA, Ka Dib Markii Xulka U-21 Ay Dagaal Iyo Cunsuriyad Kala Kulmeen Serbia
Ciyaartoyda xulka England iyo shaqaalahooda tababarka ayaa waxaa weerar uu ka soo wajahay ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababaraha Serbia, halka taageerayaasha Serbia ay cunsurinimo ku sameeyeen ciyaartoyda madow ee xulka Enhland, ka dib markii England ay 1-0 kaga badisay Serbia kulan ahaa Play off xulalka da’dooda ka hooseyso 21 jir.
England, oo lugtii hore ku soo badisay 1-0, ayaa lugtii labaad oo ka dhacday koonfurta Serbia xalayto waxa ay ku xaqiijisteen guul kale oo 1-0 ah, taasoo u ogolaatay inay ku soo baxaan wadar ahaan 2-0.
Laakiin waxa ay la kulmeen dagaal iyo cunsuriyad iyagoo u dabaaldegayay goolkii guusha ee uu u dhaliyay Connor Wickham.
Dhibaatada ayaa markaasi sii weynaatay markii ciyaartoyda Serbia ay bilaabeen inay dagaal ku qaadaan dhigooda England.
Taageerayaasha ayaa iyagana sameeynayay dhawaaq daanyeer iyo tilmaamo daanyeer iyagoo kala jeeda ciyaartoyda madow ee xulka England, Danny Rose oo ah daafaca England ayaa ka carooday sida taageerayaasha ay u sameynayaan tilmaamo cunsuriyad ah waxaana uu ku tuuray kubad taasoo keentay in casaan la siiyo.
“Waxaan qabaa inay jiraan dhacdooyin cunsuriyad lagula kacay ciyaartoyda oo ka yimid taageerayaasha, waxaana cabasho u gudbinay UEFA, waana inay wax ka qabtaan arintaan” ayuu macalinka xulka England ee 21 jirada Stuart Pearce u sheegay ESPN.